2yAl + 3XXAAY → yAl2O3 + 3xFe
aluminium Xabagta zinc aluminium oksaydh birta
2y 3 y 3x Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFe
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al (aluminium) uga falcelisa FexOy (Zinc oxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Fe (iron)?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa FexOy (Zinc oxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Fe (birta), oo muuqata dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda FexOy (Zinc oxide), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFe
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta FexOy (Zinc oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee FexOy (Zinc oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FexOy (Zinc oxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al2O3 (Zinc oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe (Zinc oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe (birta) badeecad ahaan?
16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2
aluminium kaalshiyamka fosfooraska aluminium oksaydh
16 3 8 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al (aluminium) uga falcelisa Ca3(PO4)2 (calcium phosphate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Ca3P2 ()?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa Ca3 (PO4) 2 (calcium phosphate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Ca3P2, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Ca3 (PO4) 2 (kalsiyum fosfat), oo baaba'aya
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Ca3(PO4)2 (calcium phosphate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ca3(PO4)2 (calcium phosphate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ca3(PO4)2 (calcium phosphate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Al2O3 (calcium phosphate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Ca3P2 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ca3P2 (calcium phosphate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ca3P2 () badeecad ahaan?
2Al + 3Na2O → Al2O3 + 6Na
aluminium sodium xabagta aluminium oksaydh sodium
(sax ah) (trung) (trung) (sax ah)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3Na2O → Al2O3 + 6Na
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al (aluminium) kaga falcelisa Na2O (sodium oxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Na (sodium)?
Isku qas aluminium iyo sodium oxide isku darka koob dhoobada ah. Kadib, kuleyli heerkulka saxda ah.
Dhacdada ka dib Al (aluminium) waxay la falgashaa Na2O (sodium oxide)
Heerkulka sarreeya, aluminiumku wuxuu yareeyaa oksaydh badan oo bir ah (gadaashiisa aluminium ee taxanaha falcelinta birta) birta bilaashka ah. Dareen-celintaas waxaa loo yaqaan fal-celinta kuleylka ee aluminium. Maaddaama Na ay ku taal Al hortiisa taxanaha falcelinta birta, falcelintan ma dhacdo.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3Na2O → Al2O3 + 6Na
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al2O3 (sodium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
aluminium aluminium oksaydh potassium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3K2O → Al2O3 + 6K
Waa maxay xaalada falcelinta Al (aluminium) kaga falcelisa K2O ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo K (potassium)?
Isku qas aluminium iyo potassium isku dar ah koob dhoobada. Kadib, kuleyli heerkulka saxda ah.
Dhacdada ka dib Al (aluminium) waxay ka falcelisaa K2O ()
Heerkulka sarreeya, aluminiumku wuxuu yareeyaa oksaydh badan oo bir ah (gadaashiisa aluminium ee taxanaha falcelinta birta) birta bilaash ah Dareen-celintaas waxaa loo yaqaan fal-celinta kuleylka ee aluminium. Maaddaama K uu ku yaal xagga hore ee Al ee taxanaha falcelinta birta, falcelintan ma dhaceyso.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3K2O → Al2O3 + 6K
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al2O3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta K (potassium)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee K ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K (potassium) badeecad ahaan?